हिरासतमा पूरै निराश छन् पल जतिखेर पनि झोक्राइरहन्छन् – Nep Stok
हिरासतमा पूरै निराश छन् पल जतिखेर पनि झोक्राइरहन्छन्
फागुण २०, २०७८ शुक्रबार 156
सन्देह छैन, नेपालमा सबैभन्दा बढी विवादित क्षेत्र नै फिल्म क्षेत्र हो । एउटा विवादले डाँडा नकाट्दै अर्को विवाद आँगनमै आइपुगेको हुन्छ । कोरोना महामारीयता सिनेमा हलमा त्यति फिल्म चलेनन् होला, जति फिल्म क्षेत्रमा विवाद रिलिज भए । दुई वर्षयताका एकसेएक विवादले फिल्म क्षेत्रलाई बुझ्ने र हेर्ने दृष्टिकोणमा पूरै परिवर्तन आएको छ । यसले फाइदाभन्दा घाटा दिनेमा दुई मत छैन ।
यतिबेला फिल्म क्षेत्र अर्को प्रकरणले रुमलिएको छ । तर, यसपटकको घटना सं’वेद’नशी’ल छ । एक नाबालिग गायिकाले अभिनेता पल शाहमाथि कर णीको आरोपमा उजुरी दिएपछि पल प्रहरी हिरासतमा छन् । तनहुँ जिल्ला अदालतले ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएपछि अहिले प्रहरीले घटनाको गहिराइमा गएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
कुनै घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने त्यसलाई प्रभावित पार्ने खालका क्रियाकलाप गर्नु कानुन विपरित मानिन्छ । पल शाहको प्रकरणको प्रकृति त झन् फरक छ । यो घटनामा प्रहरीलाई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गर्नका लागि सघाउनु हरेकको दायित्व हो । तर, यहाँ त चर्चाको भोकमा प्रहरीको अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्ने खालका गतिविधि भइरहेका छन् ।
पल, तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतभित्र छन् । बाहिर भने उनका समर्थकहरुले उनको पक्ष लिँदै प्ले-कार्ड बोकेर ‘निर्दोषलाई फसाउन पाइँदैन’ भन्दै प्रहरी र अदालतविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन् । त्यो भीडलाई उ’क्साउन केही थान कथित अभियान्ताहरु ‘पललाई फसाउन खोजिँदै छ’ भन्दै यूट्युबमा अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन् । ती दृश्य हेर्दा यस्तो लाग्छ, उनीहरु नै दोषी र निर्दोष छुट्याउने अदालत हुन् । यसले नेपाली समाजको एउटा अध्याँरो पाटोलाई पनि देखाएको छ ।
रिल लाइफमा त पल हातमा ह’त्कडी लगाएर धेरैपटक अभियुक्त बने होलान्, हिरासत पनि बसे होलान्। तर, यसपटक रियलमै उनी यो चरित्र बाँचिरहेका छन्। चार दिनयता अँध्यारो हिरासतको भुइँमा अन्य थुनुवासरह बसिरहेका छन् उनी।
उनी बसेको पुरुष थुनुवा थुनिने हिरासतमा अहिले कतिजना थुनुवा छन्? नेपाल समयका अनिल यादवका अनुसार मा डीएसपी खड्काले दिएको जानकारीअनुसार अहिले पुरुष हिरासतमा थप तीनजना थुनुवा छन्। पहिलो हुन्, कर्तव्य ज्या’न मु’द्दाका दुर्गाबहादुर परियार। तनहुँस्थित व्यासकै एक व्यक्तिलाई आक्रमण गरेर लु’टेको अभियोगमा उनी त्यहाँ थुनिएका छन्।
दोस्रो छन्, ला’गु प’दा’र्थ दु’र्व्य’स’नको मुद्दामा अनुसन्धारत सुन्दर विक। अनि तेस्रो, सवारी ज्या’ ‘न मुद्दा खेपिरहेका चालक लिला बहादुर सुनुवार। हिरासतभित्र पलसँग रहेका साथीहरु यिनै हुन्। ‘तर, पल अरु थुनुवाहरुसँग खासै गफिएका छैनन्, जतिखेर पनि झो’क्राइरहेका हुन्छन्,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘आफूमाथि लागेको कसुरबारे पनि खासै कुरा गर्न चाहँदैनन्। अब त बाहिरबाट भेट्न आउने मान्छेसँग पनि झर्को मान्न थालेका छन्। आमा बुबाबाहेक अरुसँग भेट्दिन भन्न थालिसके।’
यतिखेर फिल्म हलहरुमा पल अभिनित फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु–२’ चलिरहेको छ। फिल्मका निर्देशक सुदर्शन थापा मंगलबार दिउँसो ‘भाइ भेट्न’ भन्दै श्रीमती सुप्रिया कटुवालसँगै उनी दमौली आइपुगेका थिए। दुवैले हिरासतभित्र रहेका पललाई भेटेपछि बाहिर मिडियासँग ‘पल कन्फिडेन्ट रहेको’ प्रतिक्रिया दिए। तर, प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘उनी बाहिर भनिएजस्तो कन्फिडेन्ट देखिँदैनन। पूरै निराश छन्। जतिखेर पनि झोक्राइरहन्छन्।’
प्रहरीसमक्ष आ’त्मसर्मपण गर्नुअघि पलले एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै प्रहरीसँग एकपटक दर्शकसँग आफ्नो फिल्म हेर्ने प्रबन्ध मिलाइदिन अनुरोध गरेका थिए। उनको आग्रह थियो– ‘नेपाली फिल्म दर्शकसँग बसेर हेर्ने तीन–चार वर्षदेखिको सपना थियो। मैले सुनेअनुसार शुक्रबार र शनिबार फिल्मले राम्रो व्यापार गरेको छ रे। त्यसमा खुसी लागेको छ। मेरो एउटा इच्छा छ। अब सम्भव हुन्छ कि हुँदैन, एकचोटि दर्शकसँग बसेर ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ हेर्न चाहन्छु। सम्भव भयो भने एकचोटिलाई यो मौका मिलाइदिनु होला।’
उनले भिडियोमार्फत राखेको यो आग्रह प्रहरी कार्यालय पुगेपछि पनि राखे त? जवाफमा डीएसपी खड्काले हाँस्दै जवाफ फर्काए, ‘हामीसँग त त्यस्तो भनेका छैनन्। भने पनि त्यो सम्भव कुरा होइन।’ज’बर’ज’स्ती कर णी गम्भिर प्रकृतिको मुद्दा हो। यस्तो अभियोगमा हिरासत परेका अभियुक्तले त्यस्तो आग्रह गर्नु आफैंमा हास्यास्पद रहेको उनको आशय थियो।
धेरैलाई लागेको हुनसक्छ, ‘पल शाह त हिरो हुन्, उनलाई हिरासतभित्र पनि ‘भीआईपी खाना’ खुवाइएको होला या बाहिरबाट ल्याउने सुविधा दिइएको होला।’ तर, डीएसपी खड्काका अनुसार अरु थुनुवालाई जे खुवाइन्छ, उनलाई पनि त्यही खाना दिइन्छ। ‘कोभिडका कारण बाहिरबाट खाना ल्याउन दिएका छैनौं,’ उनले भने।
Prevभोकाएका रुसी सेनालाई युक्रेनीहरूले खाना दिए अनि आमा संग फोनमा भने म ज्युदै छु… भिडियो
Nextपल शाह घटना: किशोरी नाबालक भएको प्रमाणीत, कन्याजाली पनि च्यातिएको डाक्टरी रिपोर्ट आयो
खुसीको खबर ! फाराम भरेको भोलिपल्ट सवारी लाइसेन्सको पालो
कमलाको ब्याग भित्र मोबाईल र डायरी भेटियो , घ;टना झन् पछि झन रह’स्यमय बन्दै (हेर्नुहोस भिडियो)
धन कमाइ गर्ने सपना देखेर इराक पुगेका दुई नेपालीको दु’खत नि’धन